4 Calaamadood oo Aad ku Ogaaneyso In Lamaanagaagu Uu Jacaylkii Dib Uga Gurtay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 4 Calaamadood oo Aad ku Ogaaneyso In Lamaanagaagu Uu Jacaylkii Dib Uga...
4 Calaamadood oo Aad ku Ogaaneyso In Lamaanagaagu Uu Jacaylkii Dib Uga Gurtay
Dad qaar waxey galaan tijaabooyin jacayl oo qaarkood ay guuleystaan kuwo kalena ay guuldarreystaan, waxaa jira dumar badan oo is weydiiyaa maxaa jacaylkii ku dhacay oo uu sidii hore la ahaan waayaa, sidaa darteed; website-ka WikiHow waxa uu soo gudbinayaa calaamado sahlan oo lagu garan karo marka uu lamaanahaagu uu jacaylka dib uga laabtay oo aad ku ogaan karto inuu mid kale calmaday:
Fiiro gaar ah u yeelo luqadda jirkiisa
Marka aad ka dareento inaanuu agtaada nafis ku dareemayn oo ku diiqadoonayo marka aad dhinac joogto, waxey noqon karta calaamad ku tusuneysa inaanuu wax daneyn ah kuu hayn.
Fiiro gaar ah u yeelo eegmadiisa
Xiriirka indhaha waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay luqadda jirka kuwooda ugu muhiimsan, qofka dareenkiisana si wanaagsan ayaa looga ogaadaa, sidaa darteed; haddii aad aragto in labadiisa indhood aaney kugu soo jeedin, waa caddeyn kale oo muujineysa inaanuu agtaada wax nafis ah ku dareemayn oo wax jacyal ah aanuu kuu hayn.
Ballamahaaga oo uu ka baxo
Waxyaabihii aad horey ugu heshiiseen inuu qaar ka mid ah ka baxo waa calaamad kale oo digniin ah oo ku tusineysa in xiriirkiina uu calow ku jiro oo madmadow uu idin soo kala dhex galay, waxaa dhici karta iney duuro jiraan mararka qaar, laakiin marka aad aragto in 50% ballamaha aad gashaan uu ka baxayo ogow in xaaladdu ay meel khatar ah mareyso.
Si gaar ah u fiiri inuu kuu maseyrayo iyo in kale
Caado ahaan raggu gabadha ay jecel yihiin aad ayay ugu maseyraan, sidaa darteed; haddii aad aragto in aanuu kuu maseyrayn waxey caddeyn u tahay inaanuu wax dan ah kaa lahayn.
Previous articleFaah Faahin Kasoo Baxeysa Dagaal Ka Dhacay Duleedka Muqdisho
Next articleDiyaarado Dagaal Oo Saakay Duqeeyay Kulliyad Milliteri
Jabhadda Oromada ee OLA iyo TPLF ayaa ku dhawaaqay in ay...